Madaxweynihii hore ee Pakistan oo Maxkamad Waddankaa kutaal ka mumnuucday inuu Doorasho dhawaan dhacayso ka qayb galo
Tuesday, 16 April 2013 23:57
Madaxweynihii hore ee Pakistan Pervez Masharraf ayaa Maxkamad Waddankaa ku taal waxaa ay ka mamnuucday inuu ka qayb geli Karo Doorasho Madaxweynaha Waddankaa oo 11 ka bisha MAy dhici doonta. Maxkamada ayaa Go'aankooda waxaa ay sabab uga dhigiin inay socdo baaritaan eedaymo kal duwan lagu soo oogey Pervez Musharraf oo ay ka mid yihiin Musuqmaasuq iyo weliba ku lug lahaanshaha dilkii loo geytey Ra'iisulwasaarihii 2007-dii la diley ee Benazir Bhuto.
Pervez Musharraf ayaa waxaa uu dhawr Asbuuc dib ugu soo laabtay Wadanka Pakistan oo uu sanado ka hor isaga tagey, si uu uga qayb galo Doorashada dhawaan dhacaysa.
Dhulgariir cusub oo mar kale ka dhacay Iran
Tuesday, 16 April 2013 23:42
Waddanka Iran ayaa waxaa mar kale ka dhacay Dhul gariir culus oo sababay dhimashoda ilaa 34 Qof iyo dhaawaca Dad aad u badan. Dhul gariirkan cusub aya waxaa uu ka dhacay Xuduuda Iran iyo Pakistan, waxaana uu sababay bubur xoogan. Maalmo ka hor waxaa ka dhacay Iran Dhul gariir kann oo kale ah oo sababay dhimasho iyo dhaawacx Dad fara badan, laakiin in yar wuu ka tabar darnaa Dhul gariirka hadda dhacay.
Qaraxyo ka dhacay magaalada Boston oo Maraykanka iyo sababayna dhimashada dhawr Qof iyo dhaawaca Dad Badan
Shalay ayaa waxaa magaalada Boston ee Maraykanka ka dhacay 2 Qarax oo xoogan isna xiga. Qaraxyadaa ayaa waxaa lala beegsaday meel ay ka socotey Cayaar Tartar Orod ah oo ay dad aad iyo aad u badan ka soo qayb galeen qaarna y u yimaadeen inay daawadaan oo hareeraha wadada ay dadka ordayaa marayeen ku hareeraynaa. Qaraxyadaa ayaa waxaa la sheegay ugu yaraan inay 3 Qof ku dhinteen in Boqol kor u dhaafaysana ku dhaawacmeen. dadka dhaawacmay ayaa waxaa ku jira dhaawacyo culus.
Ilaa hadda ayaan la sheegin Cidda ka danbeysey qaracyadaa iyo sababta. Laamaha Ammaanka iyo kuwa Danbi baarista ayaa waxaa ay wadaan baarintaan xoogan oo jihooyin badan ah.
Dhul gariir ka dhacay Iran iyo Dad badan oo ku dhintay
Tuesday, 09 April 2013 17:57
Warar hadda dhow soo dhacay ayaa waxaa ay sheegeen in Waddan Iran uu Dhul gariir culus ka dhacay ayna ku dhinteen ilaa hadda inta la ogyahay ugu yaraan 30 Qof kuna dhaawacmeen in ka badan 800 oo Qof. Dhul gariirka oo Tankiisu yahay 6,3 ayaa waxaa uu ka dhacay Koonfurta wadankaa.
Masar oo 5 Qof ku dhinteen iska hor imaad u dhexeeya Muslimiin iyo Nasaaro
Masar ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 Qof ka dib markii uu iska hor imaad ka dhex qarxay kooxo Muslimeen ah iyo kuwo Nasaaro ah ee wadankaa. Rabshada ayaa waxaa ay ka dhalaytay sida ay sheegeen Laamaha Amaanka ee meeshaa, kadib markii Carruur Nasaro ah ay Masjid darbigiis ku qoreen Iskutilaabta Kirishtaanka. Markaa ayaa khilaaf rabsho isu bedelay meeshii ka qarxay waxaana dhintay 4 dhanka Nasaarada ah iyo 1 Nin dhalin yaro ah oo dhanka Muslimiinta ah. Masar´ayaa rabshada caynkaan oo kale ah ee u dhaxaysa Muslimiinta iyo Nasaarada wadankaa ay badanayeen iyaamihii ugu danbeysey.
North Koria oo cadeeyey inay go'aansadeen inay Maraykanka Weerar Atom Bomb ah ku qaadaan
Thursday, 04 April 2013 11:52
Waddanka North Korea ayaa waxaa ay cadeeyeen inay go'aan sadeen inay Maraykanka ku qaadaan Weerar ah Gantaalada masaafooyinka fog fog oo wata Mumbada (Atom Bomb/ Nuclear Bomb). Wadanka North Krea ayaa waxaa ay wadeen i yaamihii ugu danbeeyey oo dhan handadaad ah inay Maraykanka iyo South Korea oo ay Maraykanka xulufo yihiin weerari doonaan, waxaana ay sameeyeen Dhoolotus Militari oo kala dawan, waxaa kaloo ay jareen dhamaan gebi ahaan xiriirikii ay la lahaayeen South Korea oo meeshii ugu danbeysey oo ahaa Dhul balaaran oo Warshadeed kuna yaaley Xuduuda labadaa Waddan ayna ka shaqayn jireen Shaqaale fara badan oo labada dhinac ah ayaa waxaa ay xireen shalay.
Maraykanka ayaa asaguna dhankiisa tan iyo markii Handadaada iyo Hanjabaada North Korea ay soo badatay waxaa ay dhankooda wadaan Dhoolotus Militari ay ku qabanayaan South Korea. waxaana ay Degaankaa Geeyeen Diyaarado ah kuwa ugu Casrisan Diyaaradaha Dagaalka ee Maraykanka, waana Diyaarado aanay arki karin Qalabka Radar ka ee hawada lagu ilaaliyo oo ka qarsoon. Maraakiib Dagaalna sidoo kale waa ay geeyeen iyo Doonyaha Dagaalka ee Badda hoosteeda mara.
Mid kamida Gantaalada North Korea ee Masaafooyinka fog.
Waqooyiga Kuuriyo iyo Maraykanka oo qarka u saaran in dagaal ka dhex qarxo
Friday, 29 March 2013 20:05
Waddanka Waqooyiga Kuuriya iyo Maraykanka ayaa waxaa ay qarka u saaran yihiin in dagaal ka dhex karxo, kadib markii iyaamihii ugu danbeeyey oo dhan wadankaa Waqooyiga Kuuriya ay Handadaad wadeen iyo Hanjabaadyo kala duwan oo dhanka Maraykanka iyo Koonfurta Kuuriya oo ay Maraykanka Xulufo yihiin ula jeedaan. Maalmihii ugu danbeeyey waxaa ay sheegeen inay Ciidamadooda Heeganka ugu sareeya geliyeen ayna Madaafiic iyo Gantaalo diyaariyeen.
Madaafiicdaa Masaafooyinka fog ayaa waxaa ay ku shiisheen siday sheegeen, meelo uu Maraykanku ku leeyahay Saldhigyo Militari iyo meelo kale oo kale oo kamida Maraykanka. Maraykanka ayaa ayaguna dhankooda waxayaa ay wadaan Dhoolotus Militari oo ay ayaga iyo Koonfurta Kuuriya samaynayaan. Waxaa kale oo ay Koonfurta Kuuriyo u soo direen Diyaarado qaada Bambooyin Culus kana soo duula Masaafooyin fog fog. Sawirada Hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya iyo qaar ka mida Saraakiisha Ciidamada ugu saraysa ayaa Sawiradooda waxaa lagu daabacay Saxaafadda Caalamka, ayaga oo dejinaya Kaarto dagaal.
Hogaamiyaha Waqooyiga kuuriya oo dejinaya Kaarto Dagaal
7 Qof oo lagu diley Masjid Xuduuda ku yaal Soomaaliya iyo Kenya
Thursday, 21 February 2013 13:06
Warar Hadda soo dhacay ayaa waxaa ay sheegeen in ugu yaraan 7 Qof ay ku dhinteen Weerar laguqaaday Masjid ku yaal Mgaalo ku taal Xuduuda Soomaaliya iyo Kenya.
Dadka dhintay ayaa la sheegay inay 5 Rag 2 na Dumamr yihiin. Cida ka danbeysey Dilka ayaan la ogeyn ilaa hadda Qolada ay ahaayeen iyo sababta.
Dalxiisayaal Faransiis ah oo Waddanka Cameroon lagu afduubay
Tuesday, 19 February 2013 19:08
Waxaa Wadanka Cameroon lagu afduubay Dalxiisayaal Faransiis ah oo la sheegay inay ilaa 7 Qof ka kooban yihiin. Dalxiisayaasha ayaa la sheegay in 3 Dad waaweyn 4 na Carruur yar yar yihiin, waxaana la afduubtay goor ay kasoo laabteen meel ay daawasho u aadeen oo ah meel u dhow Xuduuda Wadanka Cameroon iyo Nigeria.
Cida Afduubka geysatey iyo sababta ayaan weli war faah faahsan laga hayn. Waa markii ugu horeysey ee Dalxiisayaal Reer Galbeed ah Wadankaa lagu afduubtay.
Madaxweynihii hore ee Cote d'Ivoire oo Maxkamada Caalamiga ee Denhaag lasoo taagey
Tuesday, 19 February 2013 14:02
Waxaa Makamada Caalamiga ee Danheeg lasoo taagey Madaxweynihii hore ee Wadanka Cote d' Ivoire Laurent Gbagbo. Waxaana lagu eedeeyey Xaasuuq, Barakicin iyo Kufsi dad aad u tiro badan.
Dadka ayaa dhibaatooyinkaa kala duwan waxaa loo geytey intuu Wadankaa Madeyweynaha ka ahaa, waxaana la sheegay in Dadka la laayey weliba dadka qoorki si naxariis daro ah loo dilay, tiradooda ay gaareyso ama ka badan tahy ilaa 3 kun oo qof.